Abakhiqizi Begesi Yokwemvelo - Abahlinzeki Bgesi Basegesi neChina Fekitri
Njengelungu leqembu le-CIMC elinemithombo ephelele yokuwela phezulu nokwehla komfula, i-Enric ihlinzeka ngesisombululo esiphelele samaphrojekthi we-CNG kufaka phakathi ukuklama, ukulethwa kwemishini kanye nokuphathwa kwe-EPC kwezokwakha nokusebenza kwesiteshi se-CNG Umama neNdodakazi, Isiteshi sokugcwalisa se-CNG, isitoreji se-CNG Bulk njll. Iphrojekthi.
I-LNG yezokuthutha i-semi-trailer
I-LNG Semi-trailer njengendlela esebenza kahle, elula nephephile yokuhambisa igesi yemvelo, kulezi zinsuku iya ithandwa kakhulu ekusetshenzisweni.
I-LNG Isitoreji Tank, esetshenziswa kakhulu njengesitoreji se-LNG, sisebenzisa i-perlite noma i-multilayer winding kanye ne-vacuum ephezulu yokufakelwa okushisayo. Kungakheka ngohlobo oluqondile noma oluvundlile ngevolumu ehlukile. Amathangi wethu wesitoreji we-LNG angahle aklanywe futhi akhiqizwe ngokuya nge-ASME, EN, ukubhaliswa kwe-NB noma inombolo yokubhalisa yaseCanada njll.
I-submersible pump skid ne-LNG cryogenic tank, umshini wokugcwalisa we-LNG nohlelo lokulawula lwe-PLC noma inhlanganisela yokuxhumeka kwe-organic kuya ku-skid, Finyelela ukuhlukanisa iziteshi ezigcwalisiwe ze-LNG zezikebhe ze-LNG kanye nezidingo zokudidiyelwa kwesakhiwo se-LNG. Lapho, i-LNG engaphansi kwe-pump skid system iyimpompo engaphansi ye-LNG, ithangi lamaphampu, i-carburetor esezingeni eliphezulu (Kubandakanya ukufaka i-turbocharger, ukulungiswa kwe-heater satellite, i-heAG heater) kanye nama-valve ahambisanayo okulawula, izinga lokushisa, i-transmitter yokucindezela, inzwa yegesi, izinhlelo zokukhanyisa, amakhabethe ezinsimbi nezinye ihlanganiswe emzimbeni we-skid, onokulayisha uketshezi, ingcindezi kanye noketshezi, ukulungisa satellite, uhlelo lwangaphambi kokupholisa neminye imisebenzi.
Isiteshi esikhulisayo esisebenza ngeLNG
Idivaysi ehlanganisiwe ye-LNG ehlanganisiwe ye-skid ine-chassis ekhuphuka nge-skid, ithangi lesitoreji se-LNG, iphampu yokufaka, umshini wokugcwalisa we-LNG, i-vaporizer ye-EAG kanye nokwehlisa amapayipi, uketshezi olunezela amapayipi kanye namapayipi akhulisa ingcindezi. Ezinye izinhlelo zifaka i-instrument air system, i-alamu system, uhlelo lokukhanyisa kanye ne-PLC control system.
I-Cascade yesitoreji i-CNG injengeyindawo yokugcina indawo futhi ikakhulukazi iziteshi zokugcwalisa ze-CNG, amafektri ezimboni.
I-Complex Natural Gas (CNG) Tube Skid isetshenziselwa ukuthutha umthamo omkhulu wegesi yemvelo iye ezindaweni lapho kushoda khona igesi, i-CNG Tube Skid inganikeza i-CNG yesiteshi se-NGV, imboni yezimboni, isitshalo samandla noma ukusetshenziswa komndeni.
I-LNG ekhulisa i-semi-trailer
I-LNG MOBILE REFUELING STATION (ngephampu)
Umthamo wejometri wethangi le-LNG i-10-50m³
1. Umklamo obekwe ku-Skid, ukusebenza okulula, umsebenzi omncane, isikhathi esifushane sokufaka, ukutshalwa kwezimali okuncane.
2. Ukulawulwa kwe-PLC, ukusebenza kalula, ukugijima okuzinzile.
3. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokufakelwa kobushushu, ukulahleka okuncane kwe-LNG.
4. Iphampu ye-Cryogenic enganyelwe (i-Cryostar) nezakhi ezibalulekile zikhetha uhlobo oluhle kakhulu lwangaphandle, ikhwalithi eqinisekisiwe.
Umkhiqizo we-Micro bulk luhlobo lwesikhulumi sokugcina igesi esisha, esiklanyelwe futhi sisetshenziselwa umphakathi omncane, imboni, amahhotela, izibhedlela njll. Umsebenzi we-Micro bulk uhlanganisa isitoreji, ukuphinda usebenzise igesi nokulawula ndawonye, ​​okuthembekile, kusebenza kahle futhi kuqiza kahle. Ngokusebenzisa i-compact, ukonga isikhala, i-skid yonke ifakwe, kulula ukuyifaka. Uhlelo olunobuningi beMicro luvumela abasabalalisi begesi abahlanganisiwe nabasebenzisi ukujabulela izinzuzo zokulethwa kwegesi okusendaweni.
U-Enric ufake isicelo selungelo lobunikazi sohlelo lokuthwala imithwalo le-CNG oluqambe igama elithi "E-CAN" elenza ukuthi i-CNG carriers yakhelwe ukuguquguquka ngokwengeziwe ngezidingo zamakhasimende.